China polyethylene Glycol 6000 Peg6000 ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Yinuoxin
Polyethylene glycol 6000 na-akwado ya site na polymerization nke mmiri mmiri ethylene glycol na nnukwu okpomọkụ, nrụgide dị elu ma ọ bụ obere nsogbu.
Polyethylene glycol 6000 (PEG-6000) Aha Bekee: macrogol 6000-992 ngwaahịa a bụ ngwakọta nke ethylene oxide na mmiri polycondensation, usoro ihe omimi bụ ho (CH2CH2O) NH, ebe n na-anọchite ọnụ ọgụgụ nkezi nke oxyvinyls.
Ngwaahịa a dị ọcha waxy siri ike flake ma ọ bụ granular ntụ ntụ, ubé smelly. Ngwaahịa bụ soluble na mmiri ma ọ bụ ethanol, ma unyi anaghị agbasa na ether. Ebe oyi dị na ngwaahịa a (Ihe Odide VI d) bụ 53 ~ 58 ℃. Viscosity were 25.0g nke ngwaahịa a, tinye ya n'ime karama ntụle 100ml, gbakwunye mmiri ka ọ gbasaa ma tụgharịa na ọnụ ọgụgụ ahụ, ghaa nke ọma, jiri Pinker viscometer nwere dayameta nke dị n'ime 1.0mm iji chọpụta dịka iwu si (Ntụkwasị VI g usoro 1) ). Ọdịdị kinematic na 40 ℃ bụ 10.5-16.5mm <2> / s.
O nwere ntakịrị ihe na-akpasu anụ ahụ na anya, ọ na-esikwa ike ka eriri afọ na-etinye obi gị dum mgbe ọ gwọchara ya ọnụ, na nsị dị oke ala. Ọgwụ nke 5% (uka) ihe ngwọta mmiri nke polyethylene oxide n'anya rabbits mere naanị obere ọkụ. PEO enwechaghị mmetụta na ọnụego ọnwụ nke azụ, nshịkọ, Anemone, oporo ma ọ bụ algae. Ya resin na okenye ihe ngwọta bụ obere awu, na mma iji na-aka. Foodlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọgwụ na Ọgwụ na United States (FDA) kwadoro iji mmiri polyethylene oxide na-edozi mmiri resin maka nri nkwakọ ngwaahịa pụrụ iche na biya ịgbakwunye ihe mgbakwunye.
Onu ogugu ihe omimi nke ihe a bu ihe dika 12.5g, nke a turu. Tinye ya na karama na-acha 250ml na ihe nkwụsị, tinye 25ml pyridine, kpoo ya ka ọ gbasaa ya, ma mee ka ọ dị jụụ. Dị ka usoro nke polyethylene glycol 400, malite na "pyridine ngwọta agbakwunyere na phthalic anhydride kpomkwem", nkezi molekụla ibu kwesịrị 5400-7800. A ga-enyocha acidity, doro anya na agba nke ihe ngwọta, na ihe fọdụrụ na mgbanye dịka usoro akọwapụtara na polyethylene glycol 400.
Nke gara aga: Polyethylene Glycol 4000 Peg4000
Osote: Polyethylene Glycol 8000 Peg 8000
Ebu Yijie R-99 Esịtidem mmako akpụzi Hapụ ...